Andro: 10 Febroary 2020
Mpandeha 14 tapitrisa no nampiasa fiaramanidina tamin'ny Janoary
Ny Tale jeneralin'ny National Airports Authority dia nanambara ny antontan'isa fiaramanidina, mpandeha ary mitondra entana tamin'ny Janoary 2020. Araka izany, tamin'ny Janoary 2020; Ny isan'ny fiaramanidina izay manidina sy miditra amin'ny seranam-piaramanidina; [More ...]
IETT dia mankalaza ny fitsangatsanganana ny tonelina sy ny trondro nostalgic
Ny tantaran'ny Karaköy manan-tantara, izay zotra faharoa faharoa, dia hankalaza ny faha-145 taonany ary ny Nostalgic Tram, tandindon'i Beyoğlu, dia hankalaza ny faha-106 taonany. Ity IETT ity dia mankalaza ny fahatsiarovana ny Tunnel sy Nostalgic Tram. Talata 11 Febroary [More ...]
Sambany, Ankara Metropolitan munisipalin'ny EGO General Director mikarakara fiofanana azo ampiharina izay ahafahan'ny mpamily mampiasa fiara fitateram-bahoaka mifanerasera amin'ny olom-pirenena. Hitohy hatramin'ny faran'ny Febroary [More ...]
Ferry Istanbul Island sy Hike mankany sidina Havaist
Ny sidina Islandy sy ny sidina Havaist dia natsangana tao Istanbul. Istanbul Metropolitan Munisipaly (IMM), ny fiakaran'ny vidin'ny fitateram-bahoaka dia manomboka izao maraina izao, ary ny vidin'ny tapakila feno ho an'ny Nosy miaraka amin'ireo sambo mifandraika amin'ny Lines City [More ...]
Marmaray dia tafiditra ao anatin'ny rafitra famindrana Istanbulkart
Marmaray, ampiasain'ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, dia tafiditra tao anatin'ny rafitra famindrana Istanbulkart, miaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny UKOME napetraka androany. Araka izany, ny olom-pirenena manana tapakila feno Marmaray aorian'ny fiara fitateram-bahoaka dia hisolo ny 7,75 lira. [More ...]
Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) miditra ny 1500 kandidà akaiky ny 356 ny vokatry ny fandinihana am-bava noho ny fandraisana mpiasa tokony ho 190 andro, na dia eo aza ny fandehan'ny fanazavana indraindray. Lisan'ireo mpangataka ampiharina amin'ny alàlan'i İşkur [More ...]
Rahoviana i Keçiören Kızılay Metro no asaina miasa?
Ny asa fivezivezen'ny lalamby AKM-Gar-Kızılay, izay hanome ny fitaterana mivantana eo anelanelan'i Kızılay sy Keçiören, dia kasa ho vita amin'ny herintaona. Rehefa miditra ny serivisy vaovao dia tsy hanao raharaha hopitaly eny amin'ny biraon'ny AKM ny olom-pirenena. Ministry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, nivoaka tao amin'ny tranokalan'ny ofisialy [More ...]
Famaliana eo no ho eo amin'ny fambara diso any Kocaeli
Ireo ekipa famantarana famantarana dia niaraka tamin'ny talen'ny sampana mpitantana ny fifamoivoizana an'ny Sampan-draharahan'ny Fitaterana ao Kocaeli Metropolitan dia niditra an-tsehatra avy hatrany tamin'ny rafitra famantarana nanerana ny faritany. Fandaminana TRAFFIC Kocaeli Metropolitan Munisipaly Ny tena singa manan-danja amin'ny fifamoivoizana [More ...]